Instagram mandefa ny "3D Touch" amin'ny Android | Androidsis
Instagram izao dia mamela anao hampiasa ny vokatra "3D Touch" amin'ny sary amin'ny Android
Iza amin'ny Instagram no mbola ampidirina fisehoan-javatra vaovao amin'ny tambajotra sosialinao satria azo io dia zavatra izay hitantsika isaky ny roa miaraka amin'ny vaovao toa ny mahagaga miova endrika sarin'ilay kianja manokana sy mampiavaka azy io, na inona ireo dokam-barotra izay mamela antsika hiditra amin'ny tranofiara vaovao toy ny Star Wars vaovao na maro hafa. Io dia mamela ny Instagram handray tombony ara-toekarena amin'ilay fironana izay misy ankehitriny, mpampiasa an-tapitrisany, tanora ny ankamaroany, mandefa ny sarin'izy ireo mampiseho ny zavatra niainany rehefa nanompo ireo matihanina sy olona malaza haneho lafiny iray hafa amin'ny fiainany.
Satria tsy mila mijanona ianao ary avela hijanona ny rano, inona no fomba tsara kokoa noho ny fanesorana azy amin'ny fiasa vaovao izay manatsara ny kalitaon'ny traikefan'ny mpampiasa rehefa hitanao ny finday Android vaovao na ireo iPhone 6s izay niaraka tamin'ny «3D Touch »Amin'ny maha-zava-baovao azy rehefa navoaka. Fomba iray hifandraisana amin'ny telefaona amin'ny alàlan'ny pulsa amin'ny hamafiny bebe kokoa ny zavatra atao matetika rehefa swipe na mifanerasera amin'ny smartphone. Instagram dia iray amin'ireo voalohany nitsambikina tamin'ny kalesy tamin'ny iPhone ka manolotra an'io fampiasa io amin'ny tambajotra sosialy ho an'ny smartphone Android.
1 Safidy samihafa araky ny tsindry avo kokoa
2 Tsotra eo imasony
Safidy samihafa araky ny tsindry avo kokoa
Ny «3D Touch» dia endri-javatra izay mamela ny mpampiasa hiditra amin'ny andiana safidy tsy mila manery ny efijery, izay mamonjy anao amin'ny tsindry bokotra vitsivitsy ary mamela fomba hafa hifaneraserana.
Ny tsy nampoizina avy tao amin'ny Instagram dia tonga tamin'ny famaranana izy ireo, taorian'ny fizahan-toetra nandritra ny volana maro, tena izany tsy mila hardware Ahoana ny fahitana ny efijery iray miaraka amin'ity fampiasa ity hijerena efijery iray, noho izany dia nanapa-kevitra ny handefa ny seranana amin'ny rafitra fiasanay ho an'ny fitaovana finday miaraka amin'ity fanavaozana izay tonga androany ity izy ireo.
Ankehitriny, afaka manao a ny mpampiasa tsindrio lava ny sary thumbnail hanatodihana azy io. Ny fanesorana ny rantsan-tananao eo afovoan'ny sary kely dia mampihena azy indray hitondrana azy amin'ny habeny tany am-boalohany, ary ny famindrana azy eo ambonin'ny bokotra sasany eo ambanin'ilay sary dia mamela azy na mizara azy tsy mila mijanona manindry ny rantsan-tànana.
Tsotra eo imasony
Ity fampiasa vaovao ity dia ankehitriny amin'ny kinova 7.13.0 ny fampiharana, ary satria mbola tsy nahatratra ny Play Store ho an'ny mpampiasa maro dia azonao atao ny misintona azy amin'ity fidirana ity ihany amin'ny farany.
Ny zavatra iray hafa dia ilay teknolojia "3D Touch" na "Force Touch" izay hitantsika fa tsy tamin'ny Apple ihany, fa koa Huawei dia iray amin'ireo orinasa Natolotro izany tao amin'ny IFA any Berlin amin'ity taona ity. Ny tanjona voalohany dia ny manolotra safidy bebe kokoa, toy ny bokotra havanana amin'ny PC, miaraka amin'ny tsindry bokotra vitsy kokoa. Ny mety hitranga dia ny mpampiasa tsy zatra an'ity endri-javatra ity ary mamela azy handalo toy ny nitranga tamin'ny fanampiana maro hafa tamina fampiharana marobe, saingy ho fotoana fohy izany.
Inona no mitranga dia ny manolotra ireto tombontsoa ho an'ny mpampiasa an-tapitrisany Manerana an'izao tontolo izao izay mampiasa ity fampiharana ity isan'andro dia mety hitarika azy ireo hifanaraka amin'izany ary ny Instagram aza hanatsara izany rehefa mandeha ny fotoana. Tsy vao sambany nisy zavatra naningana nanokatra ny làlana mankamin'ny fampiasa vaovao. Azontsika atao ihany koa ny manana safidy, ankoatran'ny Huawei sy Apple, misy mpanamboatra hafa mitondra azy io amin'ny efijery finday finday mitady fomba vaovao hisarihana mpampiasa bebe kokoa amin'ny fividianana ny terminal-dry zareo.
Raha mankany mametraka ny APK Ary tsy mety aminao izany, tadidio fa mety hitranga ihany koa ny fampiasan'ny Instagram azy ho an'ny mpampiasa maromaro.
Sintomy ny APK an'ny Instagram 7.13.0
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Instagram izao dia mamela anao hampiasa ny vokatra "3D Touch" amin'ny sary amin'ny Android
Nesorin'i Google tao amin'ny fivarotana an-tserasera ny Nexus 6
Raiso ny takelaka misy lanezy ary raiso ireo tehezan-tendrombohitra izay miandry anao avy amin'ny Snowboard Party 2